Ukuqhatha ukwenza ithayile yeefoto kwiWindows 8.1 | Iindaba zeGajethi
Uyenza njani iTayile yeefoto kwiWindows 8.1
IWindows 8.1 iza nezinto ezininzi ezintsha kwaye apho, ukuqala kwayo kwesikrini ngoku kunokwenziwa kube ngokwakho ngokokuthanda konke kunye nesimbo salo naliphi na umsebenzisi. Ithayile ebukhoma (okanye ithayile ephilayo) yenye yeempawu ukuze simangaliswe kwezi zinto, into enokuba ilungile okanye imbi ngokuxhomekeke kwimfuno esinayo yolwazi olo.
Ukuba i-tile ibhekisa kwiindaba ezahlukeneyo, into yokuba i-Live Tile yenziwe ukuba ilunge, kuba ngale nto siza kuba nethuba lokuncoma iindaba eziphuhliswayo ngexesha lokwenyani; kodwa Kuthekani ngemifanekiso neefoto? Le tile yeWindows 8.1 inokuboniswa ngeendlela ezahlukeneyo, ezibandakanya umfanekiso omileyo, i-icon emiselweyo yeefoto eziphakanyiswe nguMicrosoft okanye imifanekiso ehambelana ngokuhambelana nomxholo wesikhombisi esichaziweyo. Kule nqaku siza kukhankanya kuwe ukuba uguqule ezi mpawu ukuze ukhethe, indlela eya kuthi ngayo le tile.
1 1.Khubaza iTile ebukhoma kwiifayile zethayile kwiWindows 8.1
2 2. Khetha ifoto ethile yethayile
3 3. Faka imifanekiso embalwa kwithayile yefoto
1.Khubaza iTile ebukhoma kwiifayile zethayile kwiWindows 8.1
Le iya kuba yindlela yokuqala esiza kuyithetha ngeli xesha, oko kukuthi, ukuba akukho mifanekiso ijikelezayo, kufuneka yenze njalo khubaza iTile ebukhoma; Ngale nto sicebisa ukuba ulandele la manyathelo alandelayo:
Sisingise kwi Ukuqala kwesikrini yeWindows 8.1.
Sichukumisa okanye ucofe ithayile ye Iifoto ukungena ukuphonononga umxholo wayo.
Nje ukuba sisebenze iCharm kwicala lasekunene lesikrini.
Ukusuka kukhetho olubonisiweyo sikhetha i Cwangcisa.
Ngoku sikhetha Khetha.
Sihambisa umkhethi omncinci kuye khubaza iTile ebukhoma.
Le nkqubo kufuneka isetyenziswe xa ibha yokhetho ingabonisi ezantsi "Khubaza i icon enamandla" njengoko ubona ngezantsi.
2. Khetha ifoto ethile yethayile
Inkqubo ekhankanywe apha ngasentla isebenza kuphela kwimeko apho Asifuni naluphi na uhlobo lomfanekiso ukuba luboniswe kwithayile yeefoto ngaphakathi kweWindows 8.1 Start Screen; Ukuba ulandela inkqubo, siza kukuxelela apha ngezantsi ukuba ungawuchaza njani umfanekiso othile, ukuze uboniswe kwithayile:
Sisingise kwi Isikrini seWindows 8.1.
Sinqakraza kwaye sifake isikhombisi se Iifoto usebenzisa ithayile yakho.
Ukusuka kwigalari ebonisiweyo sikhetha ifoto enomdla kuthi.
Iya kuboniswa kwiscreen esigcweleyo.
Siphinda siyikhethe kwakhona (ngokuchukumisa okanye ngokucofa kuyo) ukuzisa ibar yokhetho emazantsi.
Kuzo zonke sikhethe «Cwangcisa njenge«.
Ukusuka kuluntu olubonisiweyo sikhetha «Ifoto yomfanekiso«.
Njengoko unokuncoma, inkqubo itshintshile kolu hlaziyo lweWindows 8.1 xa kuthelekiswa nohlobo lwangaphambili. Nje ukuba wenze la manyathelo unakho Buyela kwiscreen sokuqala, ngayo siya kuyincoma ukuba ithayile ye Iifoto ibonisa umfanekiso oza kuwukhetha ngaphambili.
3. Faka imifanekiso embalwa kwithayile yefoto
Le nkqubo inokubakude kwaye intsonkothe ​​ngakumbi kunale ikhankanywe apha ngasentla, yiyo loo nto sizakuzama ukuba ngqo xa sikhankanya amanyathelo aza kulandelwa:
Ukuba sikwi Ukuqala kwesikrini saqonda kuye Idesktop yeWindows 8.1.
Sivula ifestile ye Isikhangeli seFayile.
Sijonge indawo apho yethu Biblioteca.
Sijikela kulawulo lwe Imifanekiso.
Ngaphakathi kuyo senza ifolda eyongezelelweyo (siyibeke njenge Kukhethwe)
Ewe, yonke loo mifanekiso ikwisikhombisi sethala leencwadi kwaye enomdla kuthi kuya kufuneka siyikhethe hambisa (okanye ukope) kwifolda yeFavorites esidale ngeli xesha; Kubalulekile ukuba siyifumene Ithala leencwadi hayi izikhombisi ngokhangelo olulula kunye noMhloli weFayile; Ukuba senze oku, ngoku kufuneka siqhubeke nenkqubo yethu:
Sinqwenela ukuya Biblioteca IWindows 8.1
Sifumana ifolda Imifanekiso.
Cofa kule folda ngeqhosha lasekunene lempuku kwaye ukhethe Propiedades.
Sinqakraza kwiqhosha elithi Yongeza kwaye sikhetha ifolda esandula ukwenziwa (Kukhethwe).
Senza ibhokisi isebenze emazantsi kwaye ithi Veza kuFestile yokuKhangela.
Siyalwamkela utshintsho olwenziweyo ngeqhosha elifanelekileyo.
Ngale nkqubo ilula, loo mifanekiso siyibeke kwifolda ye Kukhethwe iya kuba ngabo bayinxalenye yethu Ithayile yeFoto ePhilayo, utshintsho oluya kulubona emva kwemizuzwana embalwa okanye ixesha elizayo ukuqala kwakhona ikhompyuter.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Uyenza njani iTayile yeefoto kwiWindows 8.1
Indlela yokufuduka kwiWindows XP ukuya kwiWindows 7 okanye yeWindows 8.1
Uyikhupha njani i icon kwi-DLL kunye neefayile ze-ExE kwiWindows